Blog Marketing amin'ny mailaka | Martech Zone
Vokatra marketing, serivisy ary vaovao amin'ny marketing mailaka ary koa torohevitra momba ny famolavolana mailaka ary fomba fanao tsara indrindra ho an'ny mpivarotra Martech Zone
Ny iray amin'ireo asa tena nahafinaritra sy nahafa-po ahy dia ny niasa ho mpitantana vokatra ho an'ny sehatra SaaS orinasa. Ny olona dia manao ambanin-javatra ny dingana takiana mba handaminana tsara, famolavolana, prototypa ary hiaraha-miasa amin'ireo fanovana kely indrindra an'ny mpampiasa. Raha te-handrafitra ny endrika kely indrindra na ny fanovana ny interface-n'ny mpampiasa aho dia hanao dinidinika amin'ireo mpampiasa mavesatra ny sehatra amin'ny fomba fampiasan'izy ireo sy ifandraisany amin'ny sehatra, hanaovana dinidinika ireo mpanjifa ho avy amin'ny fomba ataon'izy ireo
Raha miasa amin'ny orinasa manana mpiasa mihoatra ny iray ianao, dia misy ny fotoana ahafahan'ny orinasanao mampiasa sonia mailaka hitantanana sy handroahana ny fahatsiarovan-tena, ny fahazoana, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fitazonana azy ireo nefa ny fanaovana azy amin'ny fomba tsy mahasosotra. Ny mpiasanao dia manoratra sy mandefa mailaka tsy tambo isaina isan'andro isan'andro amin'ireo mpandray an-jatony, raha tsy an'arivony. Ny trano any amin'ny mailaka 1: 1 rehetra izay mamela ny mpizara mailaka anao dia fotoana tsy mampino izany
Fiarovana ny marikao sy ny lazananao amin'ny marketing amin'ny mailaka miaraka amin'ny mari-pahaizana mari-pahaizana voamarina (VMC)
Alatsinainy, Septambra 20, 2021 Alatsinainy, Septambra 20, 2021 Mark Packham
Ireo mpivarotra mailaka dia mahatakatra fa ny fampielezan-kevitra mahomby dia mihoatra ny fandefasana sy ny fandefasana hafatra. Ny momba ny fanaovana tombam-bidy sy ny fanaovana fifandraisana izay azon'izy ireo karakaraina rehefa mandeha ny fotoana. Amin'ny ankapobeny, ny fananganana fifandraisana dia manomboka amin'ny laza sy fahatokisana ny marika: Ny ankamaroan'ny (87%) an'ny mpanjifa manerantany dia milaza fa mihevitra ny lazan'ny orinasa iray izy ireo rehefa mividy vokatra na serivisy. Ny fiantraikan'ny laza sy fahatokisana amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny fividianana varotra sy ny fahombiazan'ny marketing
Fironana sy faminaniana nomerika
Alarobia 25, 2021 Alarobia 25, 2021 Douglas Karr
Ny fitandremana nataon'ny orinasa nandritra ny areti-mandringana dia nanelingelina ny fizotry ny famatsiana, ny fitondran-tena amin'ny fividianana ny mpanjifa, ary ny ezaka ara-barotra nifandraika taminay tato anatin'ny roa taona. Raha ny hevitro, ny fiovana lehibe indrindra amin'ny mpanjifa sy ny orinasa dia nitranga tamin'ny fiantsenana an-tserasera, fandefasana trano, ary fandoavam-bola amin'ny finday. Ho an'ireo mpivarotra dia nahita fiovana lehibe teo amin'ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia marketing nomerika izahay. Manohy manao zavatra bebe kokoa isika, manerana ny fantsona sy ny mpanelanelana bebe kokoa, tsy dia misy mpiasa - mitaky anay